နီကာရာဂွာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SCRL) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
အဆိုပါနီကာရာဂွာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SCRL) လုံးဝ protected အခမဲ့န့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကိုအခွန်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများပေးပါသည်။ နိုင်ငံခြားသား SCRL အတွက်ရှယ်ယာများ (ပံ့ပိုးမှုများကို) ၏အားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ SCRL များအတွက်စပိန်အမည် "Sociedades Colectivas က de Responsabilidad Limitada" ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းများ၏နီကာရာဂွါ Code ကိုပု SCRL ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, လက်ခံနိုင်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်။
နီကာရာဂွာ Central America မှာအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့တောင်ဘက်, အနောက်ဘက်တွင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်နယ်စပ်ချင်းကာရစ်ဘီယံပင်လယ်က၎င်း၏အရှေ့, ဟွန်ဒူးရပ်စ်မှယင်း၏မြောက်ဘက်နှင့်ကော့စတာရီ။
တရားဝင် "နီကာရာဂွာသမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်၎င်း၏နိုင်ငံရေးမူဝါဒစနစ်ကိုနီကာရာဂွာ၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအားလုံးဥပဒေများကျော်အောငျနိုငျတဲ့ "ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းတစ်စည်းတည်းမှုစနစ်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏သမ္မတဒီမိုကရေစီနည်းကျ multi-နိုင်ငံရေးပါတီစနစ်က၎င်း၏တအိမ်တည်းအမျိုးသားလွှတ်တော်အင်္ဂါနှင့်အတူရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။
၎င်း၏ဥပဒေရေးရာစနစ်သည်သမ္မတနှင့်လွှတ်တော်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး codes တွေကို, စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူအရပ်ဘက်ဥပဒအပျေါမှာအခြေခံသည်။
တစ်ဦးကနီကာရာဂွာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SCRL) နိုင်ငံခြားသားများကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း:
•အပြည့်အဝနိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: အဆိုပါဥပဒနိုင်ငံခြားသားများပိုင်ဆိုင်သောရရန် SCRL အပေါင်းတို့၌အစုရှယ်ယာ (ပံ့ပိုးမှုများကို) ခွင့်ပြုထားသည်။
•လုံးအခွန်အခမဲ့: နေသမျှကာလပတ်လုံးအားလုံးဝင်ငွေနီကာရာဂွာ၏အပြင်ဘက်တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်အတိုင်း, အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများချမှတ်ထားပါသည်။ မှတ်ချက်: ၎င်းတို့၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်လူတိုင်းကပေးဆောင်အခွန်မိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်အဖြစ်ကိုအမေရိကန်အခွန်ထမ်းသူတို့ရဲ့ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
•လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရား: တစ်ဦးပါဝင်သူရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုပု SCRL မှသူသို့မဟုတ်သူမ၏အလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။
•နှစ်ဦးပါဝင်: အဆိုပါဥပဒေ SCRL ဖွဲ့စည်းရန်အနည်းဆုံးနှစ်ခုသင်တန်းသားများကိုလိုအပ်သည်။
နီကာရာဂွာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SCRL) အမည်
တိုင်း SCRL နီကာရာဂွာ၌အမှတ်ပုံတင်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအပေါငျးတို့သထံမှလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီအမည်အားရွေးချယ်ရပါမည်။
အဆိုပါ SCRL ၏အမည်ပါဝင်သူရဲ့နာမညျကိုအနည်းဆုံးတဦးတည်းပါဝင်ရပါမည်။ ထို့အပြင်စကား "က y compañía limitada" (မှ "နှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ" ဘာသာ) က၎င်း၏ကုမ္ပဏီအမည်အားရဲ့အဆုံးမှာ။
အဆိုပါ SCRL ဖွဲ့စည်းခြင်း (ဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများ) တစ်ပြည်သူ့ Notary များ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ပြည်သူ့အကျင့်၏ကွပ်မျက်နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအများပိုင်ကငျြ့ထို့နောက်အစိုးရရဲ့ Mercantile Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိတ္တူမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအနီးဆုံးနှင့်အမျိုးသားရေးအခွန်အာဏာပိုင်နှင့်အတူစည်ပင်သာယာအာဏာပိုင်နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။
နီကာရာဂွာ၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်. စကားများ "အစုရှယ်ယာ" သို့မဟုတ် "ရှယ်ယာရှင်များ" ၏အသုံးပြုမှုကိုကြိုက်မထားဘူး။ အဲဒီအစား, သူတို့သညျ "ပါဝင်ဆောင်ရွက်" သို့မဟုတ် "အပါဝင်မှု" စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးအတွက်နေသော "မိတ်ဖက်" ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါစကားလုံးက "အလှူငွေ" ဟုကော်ပိုရေးရှင်းတွင် "အစုရှယ်ယာ" ၏အရပျ၌အသုံးပြုပါသည်။
နှစ်ခုပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးတစ်ဦး SCRL ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုမဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်နိုင်ငံသားများဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်စေနိုင်သည်။ သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သူများဖြစ်လာပေမည်။
သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများကို ဆက်စပ်. အတွက်သင်တန်းသားများကို၏အခွင့်အရေးများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများမဟုတ်လျှင်အားလုံးပါဝင်သူများအဘို့အတန်းတူအခွင့်အရေးပေးစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းများ၏နီကာရာဂွါ Code ကိုထက်အခြားဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြသည်မဟုတ်ဤသို့ဖော်ပြသည်မဟုတ်ရင်။ ထို့ကြောင့်, ဆွဲသွင်းပါဝင်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ၏ကုမ္ပဏီ၏အပိုဒ်မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများကိုဖော်ပြရန်။
အဆိုပါ SCRL အတွက်အမြင့်မားဆုံးအခွင့်အာဏာသင်တန်းသားများကို '' အစည်းအဝေးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းသားများကို '' အစည်းအဝေးတွေမှာချမှတ်မူဝါဒများ, စည်းမျဉ်းများ, စည်းကမ်းများ, ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၏အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းသားများကိုသူဖြစ်ရမည်သူကိုဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တို့ကကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါဒါရိုက်တာများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏တာဝန်ယူမှုကိုစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းများ၏နီကာရာဂွါ Code ကိုကန့်သတ်ထားပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ဒါရိုက်တာများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသို့မဟုတ်ပူးတွဲသို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ထိုက်မရှိကြပေ။ လာသောအခါသူတို့သို့သော်သူတို့သည်တတိယပါတီများမှခံထိုက်ပေ၏ဖြစ်နိုင်သည်
•စနစ်တကျကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုပျပိုငျခှငျ့ execute မအောင်မြင်; သို့မဟုတ်
ပညတ္တိကျမ်း (အခြားနိုင်ငံများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်မှအလားတူ) တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်သည်ဥပဒေရေးရာ entity လိုအပ်သည်။ အဆိုပါဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်သော်လည်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရပါမည်:
အဆိုပါဥပဒေ SCRL ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်ရှယ်ယာမြို့တော်အခွင့်အာဏာမဆိုနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါဘူး။
ဥပဒေ 732 "နီကာရာဂွာ၏ဗဟိုဘဏ်အော်ဂဲနစ်ဥပဒေ" (လျှော့ "ဥပဒေ 732") က၎င်း၏အရာရှိတဦးကငွေကြေး Cordoba (NIO) တွင်လုပ်ခံရဖို့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာအားလုံးငွေပေးချေမှုလိုအပ်သည်။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်သည်အခြားငွေကြေးအတွက်ဒေသခံသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းမှသည်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများတားဆီး။ ဥပဒေ 732 ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံခြားငွေကြေးရှိသူတို့၏စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုတိုင်းပြည်အတွင်းထားကြပါတယ်တစ်ချိန်ကသို့သော်အဆိုပါနိုင်ငံခြားငွေကြေးလက်ရှိနှုန်းကိုဖလှယ်မှာ NIO သို့ကူးပြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပုံမှန်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 30% ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သာနီကာရာဂွာအတွက်ရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေသက်ဆိုင်သည်။ နီကာရာဂွာအတွင်းပိုင်းကောက်ယူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်အခြေခံပြီး (လစဉ်ပေးဆောင်) အပြင်, မြူနီစီပယ် '' ကောက်ခံခြင်းစုစုပေါင်းဝင်ငွေတစ်ဦး 1% ။ ကုမ္ပဏီသာနီကာရာဂွာပြင်ပအရင်းအမြစ်များမှ၎င်း၏ဝင်ငွေရရှိပါလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်အမေရိကန်နေထိုင်သူများ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာတွင်ဝင်ငွေအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်လူတိုင်းကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
(ဈ) ကို Value ကို Added အခွန် (VAT) အတွက်လစဉ်အခွန်ပြန်လာ;
(iii) အခွန်ငွေပေးချေမှုခွငျး, နှင့်
(ii) စည်ပင်သာယာအခွန်ပေးချေမှု (လစဉ်); နှင့်
(iii) အိမ်ခြံမြေစည်ပင်သာယာအခွန် (နှစ်စဉ်) ။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များ (သင်တန်းသားများကို) မဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ပေါ်လာပါဘူး။
ပြည်သူ့အကျင့်ကို (ဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများ) ပြင်ဆင်နေနှင့်သုံးအထက်ဖော်ပြပါအစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နှင့် Mercantile မှတ်ပုံတင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူတစ်လအထိကြာသင့်တယ်။
အဆိုပါ SCRL ၏ပြီးပြည့်စုံသောပိုင်ဆိုင်မှု, privacy ကိုမျှအခွန်နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ (သင်တန်းသားများ), Self-စီမံခန့်ခွဲမှု, အဘယ်သူမျှလိုအပ်တဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်များနှင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု: တစ်ဦးကနီကာရာဂွာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SCRL) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့နိုင်ငံခြားသားများပေးပါသည်။